150lm / ပန်းကန်ပြားပျံ LED ကိုအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော် w - တရုတ် Faceled နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှလက်ကား
Power: 70w / 150W / 200W / 250W
အလင်းအား flux: 100lm / W ကို
အာမခံ:3နှစ်အာမခံ
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ DESIGN - ။ ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုမယျဆိုရငျအခြားသူများကိုရှုတ်ချပေမယ်သာငါတို့လွတ်လပ်စွာဝပ်မှ 127 lumens မှာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုသည် (image ကိုကြည့်ပါ), ကထလုပ်မယ့်! 200Watt Phillips က Luxeon SMD 3030 module တွေဝပ်နှုန်း 130 Lumens ထုတ်လုပ်ရန် LED - တနိမ့်ဝပ်ယူနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ပို. ပင် Save ။ ပရီမီယံတန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုဒီတစ်စက်မှုဇုန်တန်း LED ကိုအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်သို့မဟုတ်ဂိုဒေါင်အလင်းစေ။
သေးငယ်တဲ့ SIZE - ကျွန်တော်တို့ရဲ့နယူးစက်မှုစီးရီးအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော် '' ပန်းကန်ပြားပျံစတိုင် '' LED နည်းပညာကိုအတွင်းနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့, ကြာကြာတည်တံ့နှင့်ပိုပြီးထိရောက်။ သာ 14.5 လက်မ (360mm) အချင်းအတွက်, သစ်ဒီဇိုင်းကို performance ကိုစွန့်ခြင်းမရှိဘဲပိုပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။ သစ်ပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ LED အလင်းနှင့်အတူဟောင်းသတ္တု Halide, HID သို့မဟုတ် CFL မီးသီးများအစားထိုးရပ်တန့်ပါ။
လွယ်ကူ installer - အသင့်တပ်ဆင်ပြီး Hook installation ကိုလွယ်ကူစေသည်။ လက်ရှိအလင်းအိမ်အတွက်သို့မဟုတ်အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအစားထိုး။ အခြားအဘို့အ M10 ဟာ Thread install လုပ်ပါ။ လွယ်ကူသောကိုင်တွယ်ဘို့ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်သာ 13.52LB / 5.8KG ။
, Bright ညွှန်ကြားချက်နှင့်နောက်ဆုံးတည်ဆောက် - 5000K အရောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတောက်ပတဲ့အလင်းသေချာ။ အလင်း၏ 90 ဒီဂရီထောင့်တစ်ဦးအကျိုးရှိစွာလမ်းအတွက်အောက်ဖက်အလင်းပို့ပေးသည်။ 100,000 LED ကိုမြင့်မားနည်းပညာအပူစုပ်နှင့်အတူလူမီနီယမ်အိမ်ရာ bulbs- အစားထိုးရှိခြင်းကို LED ကယာဉ်မောင်းကာကွယ်ပေးသည်ကယ်တင်တော်မူ၏။ သာ. ကောင်း၏အပူလွန်ကျူးတော့ဘူး LED အသက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာ။ acrylic မှန်ဘီလူး။ အားလုံးအခွအေနအဘို့ရေစိုခံ IP65 ။ အားလုံးတစ်ဦးက5နှစ်ကအာမခံခြင်းဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံ။
ul AND DLC နှုနျး - ul စွမ်းအင်ကိုပြန်အမ်းဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် DLC များအတွက်စာရင်း။ DLC ဒီဇိုင်း Lighting Consortium များအတွက်ရပ်တည်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 200 watt မြင့်မားပင်လယ်အော်အလင်းအိမ် watt မှ 127 ကျော် Lumens မှာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုကြသည်ကိုဦးဆောင်!
အရောင်: 200W - 26000 Lumen - 5000K
စက်မှုစီးရီးပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ LED Lighting စနစ် - မျးခံအဆင့်ကနေ 100,000 နာရီကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အဆင့်မြင့်မားသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း Many are now copying us, but if they are not DLC certified then they are not getting 127 lumens to watts! They are using old LEDs. The LED chips and drivers required to achieve these results are ultra-high grade and our quality is proven in our results. Our Industrial Series LED High Bay Lighting, the ‘UFO Style’ lights are the latest in LED technology. Smaller size and more efficient than the traditional High Bay Lights, these look better, last longer and are easier to install.Replace your old High Bay LED Lightning, Warehouse Lights or High Bay Lights, withahigh efficiency LED UFO light. Save money and replace bulbs less often witha100,000 hour LED. LED high bay lightning is also ideal for new installations.
input Wattage 200 Watt
အစားထိုး Wattage 1200W
26000: Lumens ကိုအပ်
input ဗို့အား Range 120-277V
130LM / W ကိုမှ ef fi ciency တက်
အရောင် Rendering အညွှန်းကိန်း (CRI) 72+
5000K တောက်ပ White ကအရောင်
Beam ကို Angle 90 °
Power က Factor 0.91
frequency 50 / 60Hz MAX THD (%) 15
min ။ ambient Temp -30,0 ° F / -34,4 ℃မက်စ်။ ambient Temp 130,0 ° F / 48,9 ℃
အိုင်ပီခဲ့သည် Rating IP65 - ပြည့်ပူးတွဲယူနစ်ရေစိုခံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောလျှင်
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် 200 Watt 12.52LB / 5.8KG ဖြစ်ပါသည်
ကုနျပစ်စညျးအချင်း 200 Watt 14.2 "/ 361mm ဖြစ်ပါသည်
Finish ကိုက Black LM70
ဘဝကအချိန် 100,000 နာရီ
DLC ပြန်အမ်းဘို့စာရင်းပေါက် & စိစစ်ပြီး
အာမခံ5နှစ်
ပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ LED ဂိုဒေါင်အလင်းများ
14.8 x ကို 7.6 x ကို 14.8 လက်မ
150W / 200 Watt LED ကိုအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်ပန်းကန်ပြားပျံအလင်းများအလင်း
ဧရိယာ Lighting ခွဲခြားရေး
200 Watt ပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ LED စီးရီး - ဂိုဒေါင်အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ LED အလင်း
200W - 26000 Lumen - 5000K
သတ္တု, ပလတ်စတစ်, လူမီနီယမ်
26000 Lumen အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ LED, လက်ငင်းတွင်, Watt, Phillips က Luxeon LED, LED မီးအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်မှ 130 Lumens
အလင်းသည် Direction အဖွဲ့
200 watts က
DC က output ကိုဗို့
DC က output ကိုလက်ရှိ
(Optinal) အလင်းရောင်မှိန် 1 အလင်းမှိန်ခြင်း (PWM, 1-10V, resistors), Dali 3
CCT ကြားနေအဖြူ (4000K), သဘာအဖြူ (5000K), (3000K) နွေးထွေးတဲ့အဖြူ (5700K) Cool အဖြူစိတ်ကြိုက်ဖြစ် -can
> 80 ra ပုံမှန် flux 8400 LM 10% ± 11200 LM 10% ± 14000 LM 10% ± 16800 LM 10% ± 21000 LM 10% ±
ထိရောက်မှု 140 LM / W ကို 10% ± 140Lm / W ကို 10% ± 140 LM / W ကို 10% ± 140 LM / W ကို 10% ± 140 LM / W ကို 10% ±
> 70 ra ပုံမှန် flux 9000Lm 10% ± 12000 LM 10% ± 15000Lm 10% ± 18000 LM 10% ± 22500Lm 10% ±
ထိရောက်မှု 150 LM / W ကို 10% ± 150Lm / W ကို 10% ± 150 LM / W ကို 10% ± 150 LM / W ကို 10% ± 150 LM / W ကို 10% ±
LED အမှတ်တံဆိပ် Osram3030 နှင့် Nichia 3030 နှင့် Lumileds 3030
Beam ကို Angle 60 °နှင့် 90 °နှင့် 120 °နှင့်အတူ PC ကိုမှန်ဘီလူး
စစ်ဆင်ရေး Temp ။ -40 ℃ ~ + 45 ℃
သိုလှောင်ခြင်း Temp ။ -40 ℃ ~ + 85 ℃
ဘဝကစက်ဝိုင်း 45 ℃ 50000Hours
Ik အတန်းအစား IK08
လက်မှတ် ul, CUL, DLC, အီး, သမဝါယမ, SAA, Class ကို II ကိုဓာတုပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြ
ခန္ဓာကိုယ်အရောင် Black က (RAL9005 နှင့်အတူက default), Gray (RAL9007 များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်)
ကုန်ပစ္စည်း Size ကို (မီလီမီတာ) & Net ကအလေးချိန် MOSO ယာဉ်မောင်း
ထုပ်ပိုး Size ကို (မီလီမီတာ) & စုစုပေါင်းအလေးချိန် MOSO ယာဉ်မောင်း
installation mode ကို ဝင်ရိုးစွန်း (ပုံသေ), Chain (optional), ကွင်းပိတ် (optional)
ယခင်: 150W LED ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလငျး
နောက်တစ်ခု: LED ဘိုးလင်းအလင်းအိမ်